महाअष्टमीका दिन किन दिइन्छ पशुबलि ? - Dainik Online Dainik Online
प्रकाशित मिति : ८ कार्तिक २०७७, शनिबार १ : २७
काठमाडौं । नेपालीको महान पर्व दशैंका बेला देशका विभिन्न मन्दिर र शक्तिपीठहरुमा बलि दिने प्रचलन छ । दशैंका बेला मात्र नभइ अन्य पर्व, उत्सव र धार्मिक एवं तान्त्रिक कार्यसिद्धिका लागि पशुबलि दिइँदै आएको पाइन्छ । कुनै समय मानव बलि समेत प्रचलनमा रहेकोमा हाल यो लोप भइसकेको छ ।
देबी देवताका नाममा आखिर बलि किन दिइन्छ त ? यसबारे विभिन्न तर्क–वितर्क र बहस पनि हुँदै आएका छन् । महाअष्टमीको दिन शास्त्रसम्मत रूपमा दशैंघर, कोतलगायत देशका विभिन्न शक्तिपीठमा पशु बलि दिइ दुर्गाभवानीको विशेष पूजाआजा गरिनाले सुख-समृद्धि र मुक्ति पाइने जनविश्वास रहिआएको छ ।
खासमा बलि शब्दले प्राणीको बलिदान दिइनुलाई नै जनाउँछ । तर बलिका मुख्य ३ प्रकार रहेको यसबारे जानकारहरु बताउँछन् । ती हुन्- सात्विक, राजस र तामस बलि ।
देबी–देवताका मन्दिर र यज्ञ-यज्ञादिमा विधिपूर्वक दिइने बलि मुक्तिसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । विवेकशील र अविवेकशील प्राणी दुवैले मोक्ष प्राप्तिको चाहना गर्ने हुनाले पवित्र स्थल तथा शक्तिपीठहरुमा पशुपंक्षीको बलिदान दिएर उनीहरुको मोक्षमार्ग सुरक्षित गर्नकै लागि बलि दिइने गरेको शास्त्रीय मत राख्नेहरु तर्क गर्छन् ।